I-Byre - indawo yesitudiyo samatye, iTalmine NC500/Beach - I-Airbnb
I-Byre - indawo yesitudiyo samatye, iTalmine NC500/Beach
Uvimba sinombuki zindwendwe onguGez
I-Byre sisitudiyo esibiyelwe ngamatye esikhethekileyo esiguqulwe sisuka kwishedi kwaye silungele ikhefu elinoxolo okanye ukubaleka kwezothando! Isiseko sebhedi saseFuton esinomandlalo ophindwe kabini okumgangatho wehotele kwindawo enkulu yokuziphakela enemibono emangalisayo yolwandle neziqithi kunye nokuhamba ngokulula kwevenkile, ibha/irestyu kunye nolwandle. Ikhitshi elincinci kodwa elixhotyiswe kakuhle elinemicrowave & hob/oveni (H36.5 W47.5 D30.7cm) Amanzi amaninzi ashushu okuhlambela. I-Woodburner kunye nezifudumezi ezi-2. Indawo entle njengesiseko sokuhlola.
I-BED-Sibonelela ngeendawo zokulala ze-polycotton ezisemgangathweni wehotele kunye neetawuli kwiindwendwe ezi-2 kwisiseko sebhedi ye-futon kunye nomandlalo osemgangathweni wehotele. Akukho ndwendwe ezongezelelweyo zivumelekile.
ABANTWANA-Le ndawo ayifanelanga abantwana. Nceda uqhagamshelane nathi ukuba awukholelwa ukuba lo ngumba weqela lakho.
UKUTYA & NOKUPHUZA-Sibonelela ngezinto zokwenza iti kunye nekofu kuquka ubisi olutsha kunye neswekile. Ikhitshi lincinci kodwa lixhotyiswe kakuhle ngemicrowave & neoveni encinci (H36.5, W47.5, D30.7cm) ene hob.
INKUNZI - Sibonelela ngezibane zomlilo, iimatshisi, ukubasa, amalahle kunye nezigodo. Ukuba ufuna ngaphezulu ngexesha lokuhlala kwakho, zonke ziyafumaneka kwivenkile yalapha ekoneni. I-woodburner iyacocwa kwaye ilungele ukuba uqale umlilo wakho. Unokuba yi-dab yesandla ekusebenziseni isitshisi somthi kodwa ukuba akukho miyalelo / iingcebiso eziluncedo.
I-WIFI & MOBILES-I-WiFi iyafumaneka kwipropati. Ulwamkelo lwemfonomfono lunezibhaxu (kuxhomekeke kumboneleli wakho wenethiwekhi). Kukho iTV enebhokisi yokujonga simahla kunye nokhetho lweeDVD. Akukho radio kwipropati.
UKUFIKELELA-Ipropathi yonke ikwinqanaba eli-1 ngaphandle kwamanyathelo ama-2 angaphandle (nceda ubone iifoto) ngoko inokulungela iindwendwe ezinokushukuma okulinganiselweyo kodwa hayi kwizitulo ezinamavili.
I-PETS-Ipropathi inobubele kwisilwanyana sasekhaya kunye negadi ebiyelwe ngokukhuselekileyo kunye nokupakishwa kwendlela kodwa nceda usazise ukuba uzisa izilwanyana ukuze senze ucoceko olongezelelweyo kwiindwendwe ezilandelayo...
4.95 · Izimvo eziyi-107
Kukho incwadi yokuhamba kwendawo kwipropathi kunye nemephu ye-OS. Ukufikelela ngokulula ehlathini, ingxondorha kunye nokuhamba elunxwemeni. Ukuhamba okufutshane ukuya eBen Hope, eScotland eyona ndawo isemantla 'Munro'. Ukuhamba umgama ukuya kwiPosi yaseTalmine / ivenkile elula kunye nehotele yaseCraggan (ibha / indawo yokutyela) kunye neelwandle zaseTalmine kunye neSkinnet. Iimayile ezi-5 ukuya kwilali yaseTongue kunye neevenkile zayo / iofisi yeposi / amafutha / iihotele (ibha / indawo zokutyela). Uhambo lwemini oluya e-Orkney, uJohn o' Groats kunye ne-Durness lunokwenzeka.
Umbuki zindwendwe ngu- Gez
Sisebenzisa inkqubo yokujonga ngaphakathi nangaphandle. Uya kuthunyelwa nge-imeyile / i-airbnb ikhowudi yakho yokungena eyahlukileyo kusuku olungaphambi kokuba ungene.
Siza imeyile izikhombisi-ndlela kwipropati kunye nemiyalelo yokusebenzisa isitshixo sokhuseleko kunye nefowuni yethu yoqhagamshelwano kunye neenkcukacha ze-imeyile .... nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ngayo nayiphi na imibuzo okanye izicelo.
Siyavuya ukwenza amalungiselelo okudibana neendwendwe ukuba zinexhala lokusebenzisa i-self check in system.